Louis van Gaal Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'
Home MAAMULKA FOOTBALL Louis van Gaal Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'
LB wuxuu soo bandhigayaa Sheekada Full of Manager ah ee ugu fiican ee loo yaqaan Nickname; 'Boqorka'. Our Louis Van Gaal Carthone Story iyo akhristow sheekooyinka sawir-qaadku wuxuu kuu keenayaa xisaab buuxa oo munaasabado la taaban karo ah laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor caan, nolosha qoyska iyo kuwo badan oo OFF iyo ON-Pitch xaqiiqda yar ee la yaqaan ee ku saabsan isaga. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, Lets Begin.
Louis van Gaal Childhood Story Plus Xogta Warka Xogta: Nolosha Hore
Aloysius Paulus Maria Louis van Gaal wuxuu ku dhashay 8th Agoosto 1951. Wuxuu ahaa kan ugu da'da yar iyo cunug qoys ka weyn sagaal walaalo ah. Isagoo koraya, Van Gaal waxa uu xiriir la yeeshay aabihiis oo aad u xanuun badan, marar badanna wuxuu ka soo horjeestay barbaarinta adag ee Katooliga ah.
Ilmo ahaan, noloshiisu waxay qayb ka ahayd anshax adag oo qayb ka ah. Qaar ka mid ah waxay soo jeedinayaan garabkiisa is-hubsiinta ah inuu ka yimaado 'ilmaha' oo afar naasiin ah, afar gabdhood iyo waalidkiisa jecel. Si kastaba ha ahaatee, Van Gaal wuxuu u sheegayaa si kala duwan. Waxa uu aaminsan yahay in noloshiisa guriga uu ku siiyey bartilmaameedkiisa habdhaqankiisa.
Caruur ahaan, gurigiisa hooyga ee Amsterdam wuxuu ku dhowyahay De Meer stadium - Waa Ajax garoonka. Van Gaal wuxuu lahaa wax kasta oo la dalbaday, ilmo kastaa wuxuu u qoondeeyey shaqadiisa, mid ka mid ah inuu miiska saaro, mid lagu dhaqo suxuunta ... Louis ayaa loo isticmaalay kormeerida dukaanka waalidkiisa iyo faaruqinta buurta barafka loo baahan yahay si loogu quudiyo qoyska .
Maalmaha soo socda, Young Louis van Gaal sidoo kale wuu dheeraa, markii uu goolal ku dhaliyey saaxiibadiisa waxa uu qeylin lahaa: 'Henkie, Henkie, Henkie!'
Louis van Gaal Childhood Story Plus Xogta Warka Xogta: Dhaqanka
Qaar ka mid ah qaababka Louis Van ayaa soo bandhigay ciyaarahii caruurta ee wali halkaa uu ahaa qof weyn, oo ay ku jirto in uu iska ilaawo cilladihiisa iyo sabir la'aanta dadka kale. Waxay ahayd mid adag oo xitaa markaa, ma uusan aheyn wiil uu kaftamo. Noloshu waxay ahayd mid aad u culus. Wuxuu kaliya rabay inuu noqdo kan ugu fiican, marwalba wuu badiyaa. Marka uu caroodo marka uu lumiyo kulan, xitaa gabadhiisa ugu fiican ayaa ka baqeysa isaga.
Sida laga soo xigtay isaga .."Qiiro xoog leh ayaa fure u ah guusha aan". Louis wuxuu ahaa ilmo daran oo ku dhashay si uu u noqdo mid ku guuleysta shahaadada.
Louis van Gaal Childhood Story Plus Xogta Warka Xogta: Nolosha Qoyska
Aabihiis, oo ah maamule leh shirkad tamarta, ayaa dhiirrigelisay Louis Louis. 'Aabbahay wuxuu leeyahay dabeecad isku mid ah sida aan qabo'. Ayuu yiri. 'Waxa uu lahaa maskax furan. Waxa uu dhageystay oo uu dhiirigeliyay in uu go'aan ka gaaro oo ay adagtahay in uu aqbalo qaar. Wuxuu ahaa hoggaamiye hogaamiye. '
Van Gaal Snr waxaa uu ku dhacay weerarka wadnaha markii Louis uu lix jir ahaa, shan sano kadibna uu ahaa 11. Ka dib dhimashadii aabaheed, hooyadiis waxay noqotey xubin muhiim ah oo noloshiisa ah, jacaylkeeduna marwalba way muuqatay.
Markii la siiyay Dutch-ka udubdhexaad ah, Amarka Orange-Nassau, wuxuu u xaqiijiyay in ay ahayd dhinaciisa si uu ula wadaago waqtiga. Van Gaal ayaa markaa ka dib sheegay in uu ka yimid iyada oo uu dhaxlay qiimaha asaasiga ah ee daacadnimada, ixtiraamka, edebta iyo mas'uuliyadda.
Louis van Gaal Childhood Story Plus Xogta Warka Xogta: Xaaska koowaad
Markii da'da 18, Van Gaal ayaa la kulmay Fernanda Obbes oo ka tirsan koox dhalinyaro ah. Waxay ahayd 16 sidii markaa. Labada dhinacba waxay ku dhaceen jacayl. Saaxiibayaal ayaa sheegay in ay jacayl u arkeen arinkii ugu horreeyay ee ay indhahooda ku xirxireen bulshada dhalinyarada ee Katooligga ah ee gurigiisa. Waxay guursadeen saddex sano ka dib, waxayna lahaayeen laba gabdhood, Brenda iyo Renate.
Louis van Gaal wuxuu jecel yahay kan labaad ee kaniisadda kaniisada sababtoo ah iyada. Waxa uu jecel yahay macaan-macaan-macaan oo dhadhan fiican leh. Wuxuu helay sabab wanaagsan oo uu ugu mahadnaqayo aabihiis isaga oo ku adkeynaya inuu kaniisad ku dhejiyo.
Louis van Gaal Childhood Story Plus Xogta Warka Xogta: Cadaadiska
Waxay ahaayeen guursaday markii Louis uu wali 21 oo keliya ku faraxsanaa, ilaa 1994 uu ku guuleystay guushiisii ​​ugu horreysay ee uu u hayay tababare Ajax, waa la xanuunsaday. Dhakhaatiirtu waxay ka heleen kansarka beerka iyo kansarka xajmiga. Isagoo ka shaqeynayay kooxda ugu weyn ee kubadda cagta Holland wuxuu heley dhammaan dhakhaatiirta iyo dhakhaatiirta qaliinka, laakiin waxba ma sameyn karno.
Taa bedelkeeda, Van Gaal ayaa isku arkay isagoo wajahaya dhibaatooyin ka baxsan xagiisa. Inkastoo uu ku dadaalayay inuu xaaskiisa u noqdo mid si gaar ah loo leeyahay, dadwaynaha waa inuu u muujiyaa edbin naadir ah sida taageerayaasha reer Holland ee ka soo horjeeda taageerayaashooda ay kufsadeen dhibaatadooda oo ay sameeyeen wax kasta oo ay awoodaan inay ku guuldareystaan.
Holland, waxaa jira laba erey oo loogu talagalay haween. 'Vrouw' waxay muujineysaa ixtiraamka saaxiibtinimo. 'Wijf' waa aflagaaddo - loo tarjumay sida wax u eg 'bitch'.
Hal kulan oo Ajax ah, taageerayaal taageersan waxay qabteen banner iyadoo la tixraacayo xaaskiisa xaaskiisa. Calaamadda ayaa akhrinaysa: "Van Gaal, Iskutallaab ku ah Een kankerwijf ', kaas oo si qumman u turjumi lahaa sida 'Van Gaal wuxuu leeyahay qashinka kansarka'. Waa in ay dhaawacantay laakiin wuu diidey in uu cid kale u arko xanaaqiisa. Waxa uu kaliya weydiistay dhagaystayaasha gaarka ah. Xaqiiqdii waa wax adag in la arko ciyaartoyda Ajax ay ku garaacday xitaa iyada oo jirkeeda ... .Inkastoo ay ku dhibtooneyso noloshiisii.
Run ahaantii, waxaa jira waxyaabo xitaa Louis van Gaal uusan xakameyn karin. Nolosha had iyo jeer waxay qabatay shaqo adag, anshax iyo amar maaddaama qiimaha asaasiga ah loo direy duufaan markii ay dhimatay. Isla sannadkaas 1994, Obbes wuxuu ku dhintay kansarka iyo kansarka xajmiga. Waxay aheyd markii ugu danbeysay ee Louis van Gaal mar uun ku ooyo.
Warbixinnadu waxay muujiyeen inay tahay sigaar cabid culus. Tani waxay ahayd inay sabab u tahay dhimashadeeda.
Louis van Gaal Childhood Story Plus Xogta Warka Xogta: Jacaylka Ilaahay ka dib dhimashada xaasaska
Bishii Jannaayo, 1994, markii uu xaaskiisii ​​hore Fernanda Obbes u dhintay kansarka beerka ee da'diisu tahay 39, wuxuu ku dhawaadaa inuu ka tago kubada cagta si uu u ilaaliyo labadooda gabdhood, Brenda iyo Renate. Ugu dambeyntiina, wuxuu ahaa Ilaah oo uu ka soo bixiyay. Van Gaal wuxuu ku celceliyay: "Markii aan ka lumay Fernanda, waxay ahayd markaa waxaan joojiyay inaan rumaysanno Ilaah oo aan joojiyay inuu noqdo Catholic. Ilaahi ma ixtiraamo bani-aadamka iyo dhibaatada xaaskeyga. Waxaan rabaa inaan waxba ka yeelin Ilaah oo dadka u ogolaanaya inay wax badan qabato. " Louis wuxuu ka tagay rumaysadkiisa wax yar kadib.
Fernanda ayaa iska soo wareegay kaliya 16 ka hor inta uusan Van Gaal uusan Ajax u noqon kooxda heysata Champions League. Wuxuu ku daray: "Waxaan dalbaday inaan iska casilo tababare Ajax. Waxaan waydiiyay gabdhaheyga in aan ka baxo ciyaarta si ay u kiciyaan, laakiin labaduba waxay sheegeen in ay doonayaan in aan sii wado oo aan sheego inay sidoo kale jeclaan lahayd hooyaday. "
Louis van Gaal Childhood Story Plus Xogta Warka Xogta: Mar labaad
Ka dib markii uu geeriyooday geeridiisii, Louis van Gaal wuxuu la kulmay gabadhiisa labaad ee Truus. Waxay la kulmeen muddo dheer ka dib dhimashadii Fernanda iyo waxay wadaagayeen sanado 14 ka hor Louis oo lagu soo bandhigay 2007.
Louis van Gaal marnaba ma sameynin sida caadiga ah markii uu soo jeediyay. Ma uusan hoos u dhigi karin hal jilibka - lugtiisa jabtay waqtigaas! Waxay is guursadeen dhalashadiisa taariikhda qabow- 08-08-08 - sida martiqaadka loo tilmaamay.
Truus shaaca ka qaaday: '' Waxaan rabay in aan tago Vegas, kaliya laba naga mid ah, laakiin Louis wuxuu doonayay dabaal weyn. Waxa uu yiri: "Haddii aad leedahay wax dabaal ah, ka dibna u dabbaaldeg". Wuxuu ahaa sax. Guurka qarsoodi ah ayaa khalad ah. Aroosku wuxuu ahaa mid cajiib ah. Waxay ii aheyd mid muhiim u ah, isaga oo aan muhiim u ahayn isaga. Wuxuu mar walba iigu tixgeliyaa sida xaaskiisa, laakiin warbaahinta ayaa iigu tilmaamtay aniga oo ah "saaxiibka Louis". Taasi ma jecla.
Weli waxaa jira sawirka Fernanda (xaaskiisa kowaad) - Van Gaal wuxuu lahaa laba gabdhood - gurigiisa wuxuu hadda la wadaagaa xaaskiisa labaad ee Truus. Waxaa laga helaa inuu dib u soo kabsado ka dib guulihii uu ka gaaray kooxaha oo dhan. Xitaa maalmaha dhalashada.
Louis van Gaal Childhood Story Plus Xogta Warka Xogta: Xiriirka Hore ee Jose Mourinho
Goorma Sir Bobby Robson waxaa laga ceyriyay 1997, waxa uuna u muuqday in uu kaaliye-turjumiyayaal ah (Jose Mourinho) laga yaabo in lagu qasbo isaga. Hase yeeshee, 34-sano jirka Mourinho ayaa ku tartamayay madaxweynaha kooxda, Jose Luis Nunez, iyo van Gaal oo jecel waxa uu arko. Sir Bobby ayaa weydiistay van Gaal inuu ku sii hayo ninka da'da yar, ciyaaryahanka reer Holland ayaana ku adkeystay. "Cadho ayuu ahaa mid cajiib ah inuu arko,". Van Gaal ayaa yiri. "Markaas ayaan ku jawaabay: 'Waxaad tahay ninkayga'. "
Hase yeeshee waxa uu ku jiray tababaraha reer Holland oo uu Mourinho u sameeyey talaabadii ugu horeysay ee maamulka.
Saddex sano oo naadi ah oo Nou Camp ah ayaa ku guuleystay guushii ay ka gaareen niyad jabkii Yurub - oo ay ku jiraan qaar ka mid ah ciyaaraha caanka ah ee ay la leeyihiin kooxaha Ingariiska. Waqtiga wada shaqeynta uu dhamaaday, tababarku wuxuu sameeyay tallaabooyinkiisii ​​ugu horeeyay ee wadada dheer si uu usii jiido sayidkiisa isaga oo la qabsanaya ciyaar.
Louis van Gaal Childhood Story Plus Xogta Warka Xogta: Nolosha Manchester United
17 January 2017 waxaa lagu dhawaaqay in Van Gaal uu ka fariistay "Sababo qoys". Waxa uu mar dambe sheegay in uunan ahayn kaliya sabbatical. Waxa ay ku habboon tahay in la ogaado in Truus (xaaskiisa labaad) ay necbayd mid ka mid ah United. Wakhti badan ayay wadaagaan wakhti badan ka dib hawlgabkiisa.
Louis van Gaal Childhood Story Plus Xogta Warka Xogta: Malaayiin Lumin Mashruuca Ponzi Scheme
Sida laga soo xigtay Daily Telegraph ayaa, waxay ku soo baxday 2009 in Van Gaal uu ka lumay 5 million pounds kaas oo maalgashi ku sameeyay mashruuca Bernardo Madoff ee Ponzi.
Tani waa qorshaha Ponzi Guru Wall Street Guru. Wuxuu la socday xiddigo kale oo ka mid ah adduunka caalamiga ah ee isboortiga adduunka lumay markii uu si toos ah ama si aan toos ahayn ula dhaqmay Madoff.
Louis van Gaal Childhood Story Plus Xogta Warka Xogta: Guulaha
Van Gaal, oo lagu magacaabo "Iron Tulip" oo uu ku dhuftamo, ayaa mar uun hogaaminayay kooxda reer Holland seddexaad
Koobka Aduunka. Kooxda Ajax ayaa ku guuleysatay Champions League, waxaana uu qaaday horyaalka Jarmalka ee Bayern Munich iyo Spain oo La Liga kula ciyaartay Barcelona.
Louis van Gaal Childhood Story Plus Xogta Warka Xogta: Ciribtirka Manchester United Shaqaalaha ugu Caansan
Wargeyska The Sun ayaa shaaca ka qaaday in ciyaartoyda ay jecel yihiin Barry Moorhouse, 64, markii hore lagu soo bandhigay albaabka banaanka laga soo daayay Van Gaal sababtoo ah ma jirto xitaa hadii uu qarash gareeyay sanadihii 47 ee kooxda.
Waxa uu ahaa tababaraha xiriirka kubada cagta Reds. Wuxuu ku bilaabay naadiga isagoo ah sarkaal maaliyadeed ah iyo lacag kaash ah oo loogu talagalay Ururka Horumarinta Manchester United oo ah kooxdii lacag ururineysay. Ka dib waxaa loo wareejiyay doorka Lataliyaha Ciyaartoyda.
Louis van Gaal ayaa dareensan inuusan sameynin sida ugu fiican ee uu uga soo kabsan karo ciyaartoydiisa ka dib markii uu ciyaaray kulamo soo noqnoqonayay. Ka hor inta Van Gaalku uu hoos u dhaadhiciyay joornaalka, ayuu boorka horay ugu tuuray isaga. Tani waxay ka tagtay maareynta guud ee Man United oo keentay in ay dad badan oo hor leh ku tukadaan.
Louis van Gaal Childhood Story Plus Xogta Warka Xogta: La xariir Johan Cruyff iyo Ronald Koeman
Mar uu ka hadlay arinta halyeeyga reer Holland Johan Cruyff halka uu ahaa ciyaaryahan. Tababaraha ayaan la hadli doonin halyeeyga reer Holland Johan Cruyff, 67 - oo hore uga soo horjeeda booska Ajax ee horaantii 1970s. Sida laga soo xigtay asxaabta ku dhow, weli wali wali waa in ay heshiiyaan.
Waxa uu sidoo kale isku dhajiyay tababaraha cusub ee Southampton Ronald Koeman inkastoo labada ciyaaryahan ay sheegeen in ay ka soo kabsanayaan Koobka Aduunka.
Louis van Gaal Childhood Story Plus Xogta Warka Xogta: Gawaarida ganacsiga
Van Gaal ayaa mar hore ka soo qaaday qolka labiska ee Munich si uu u tuso Bayern
Ciyaartoydiisa wuxuu kubbada ku haystay iyaga.
Su'aalaha la xannibay waxaa lala kulmayaa sumcaddiisa astaanta: "Miyaanan caqli gal ahayn, mise adiguba miyaydaan ahayn?" Wuxuu u sheegaa saxafi kasta oo isaga ka codsada inuu xaq u yeesho falkiisa.
Louis van Gaal Childhood Story Plus Xogta Warka Xogta: Shakhsi ahaaneed Soo koobid
Pals ayaa sheegay inuusan ka hadlin lacagta (qof khatarta ugu jira loona lumay 5 million pounds si qorshe ponzi ah oo wali uusan gariirin) waana mid daacad ah oo aan marnaba been sheegi karin. Ruud ayaa intaa ku daray: "Sidoo kale wuxuu kalsooni ku qabaa, in kasta oo aad jebiso kalsoonidaas waa lagaa dhammeeyey."
Martin Spanjer, 61, ayaa yiri: "Louis wuxuu noqon karaa wax qariib ah. Waxaan u maleynayaa inuu jiro laba dhinac oo isaga ka mid ah - mid waa mid aad u fiican oo is-hoosaysiiya, kan kalena wuxuu u maleynayaa inuu yahay Ilaah. "
Qaar kale waxay u maleynayaan in uu si qalad u fahmay. Saaxiib kale ayaa yiri: "Waxa uu ku adag yahay banaanka
laakiin gudaha gudahiisa waa mid aad u jilicsan. " Telefishinka wuxuu marwalba halis u yahay, laakiin asxaabtiisa uu ku leeyahay dareen wanaagsan ayuu leeyahay.
Louis van Gaal ayaa sidaan yiri; "Anigu waxaan ahay qof aan ahay, waxaana haystaa qaababkayga. Ma doonayo in aan isbedelo oo aanan rabin. Waxaan ahay warbaahin, sida madax adag sida baqshad, laakiin sidoo kale waxaan ahay mid ka mid ah tababarayaasha maalinta casriga ugu wanaagsan, iyo dhiiri-galinta kubada cagta.
Louis van Gaal Childhood Story Plus Xogta Warka Xogta: Nolosha Ajax
Under Louis van Gaal, koox yar oo Ajax ah ayaa noqotay kooxdii ugu fiicneyd ee Europe, oo ku guuleysatay Champions League isla markaana sannadka oo dhan aan laga badinin horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan. Van Gaal wuxuu kormeeray horumarka De Boer walaalihiis, Clarence Seedorf, Edgar Davids iyo Edwin van der Sar. Si kastaba ha ahaatee, ka dib markii la helo lacag badan oo dhaqaale ah, ka dib, qaar badan oo ka mid ah ciyaartoydooda da 'yarta ayaa ku guuldareystay inay buuxiyaan kartideesankooda - Patrick Kluivert, Winston Bogarde, Michael Reiziger iyo Finidi George oo ah tusaalayaal.
Van Gaal wuxuu leeyahay wax xiiso leh sababtoo ah tani waa: "Waxaan qabaa inay macquul tahay in ciyaartoy ka tagaan Ajax aysan gaari karin heerkooda hore ee meel kale. Qofna ma tababbarayo sida aan u ciyaarno, mana jirto meel ka mid ah tayada ciyaartoyda oo isku waafaqay Ajax. Dibadda, ciyaaryahan waa inuu mar kale isdifaacay. Waxaa lagu qiimeeyaa sida uu u leeyahay tayadiisa, mana aha, sida nala ah, qiimaha uu u leeyahay kooxda. Ajax, kooxda daciifka ah ayaa daboolay kooxda. Taasi waa nuxurka dhismaha. Waa uu ku fiicnaan karaa kooxda. Dalalka kale waa kuwo ka dambeeya arimahan: waxa muhiimka ah ayaa jira. "
Louis van Gaal Childhood Story Plus Xogta Warka Xogta: Jordi Alba oo ah saaxiibkii hore
Louis van Gaal oo da'diisu tahay Jordi Alba markii uu caruur ahaa. Wuxuu la kulmaa qoyskiisa inta uu ku sugan yahay Barcelona, ​​welina ku dhowaan jiray.
Jordi ayaa sidaasi ku dhaliyey waqti walba Van Gaal wuxuu ugu yeeraa inuu dib u cuno isagoo ciyaal ah. Mar uu isku dayay inuu u soo saxiixo United laakiin waxaa hogaaminayay guddiga si uu u saxiixo Luke Shaw isaga oo aan ka aheyn.
Louis van Gaal Childhood Story Plus Xogta Warka Xogta: Ciyaartoyda aan jeclayn isaga ma jecla
Waxa uu ka tagay ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Brazil Giovanni ka dib markii uu ku biiray Barcelona, ​​isagoo isku dayaya inuu kursiga keydka ku soo laabto, islamarkaana uu ka tago Olympiakos. 2010, cayaartu waxay soo martay: "Van Gaal waa kibir, sharaf iyo dhibaato. Noloshaydii isaga la ahayd waxay ahayd mid cabsi badan. Burburiyayaashu ma doonaynin; Waxa uu igu dhuftay sidoo kale wuxuu la dagaalamay Rivaldo iyo Sonny Anderson. Mar walba wuxuu na siiyay cudur daar ah oo aanan si fiican u tababarin. Waan ogahay in uu qabo dhaawac jilicsan. Ma lahan wax fikrad ah kubada cagta, waxna ma yaqaanno. Waqtiga aan la joogay, marwalba ayuu tababar sameeyay. Finalka 2010 Champions League ee dhex maray Inter iyo Van Gaal ee Bayern Munich, Giovanni ayaa yiri: "Haddii ay igu xiran tahay, waan jeclaan lahaa hadii Inter ay ku guuleysato 15-0 oo shan gool ka dhalisay Lucio."
Intii lagu jiray labadii sano ee uu la joogay Barcelona (markii ugu horeysay ee uu ku guuleysto tan labaad), Van Gaal wuxuu ku dhibtooday inuu ku guuleysto ciyaartoyda iyo taageerayaasha, si joogto ah ula dagaallama warbaahinta. Safarkiisa waxaa ku wehliyay Rivaldo xiddiga kooxda.
"Kama ilmeeyo Van Gaal, mana uu ixtiraamayo" ayuu yiri Rivaldo.
Louis van Gaal Childhood Story Plus Xogta Warka Xogta: Maareynta United oo leh Iron Fist
Ashley Young ayaa shaaca ka qaaday sirta saaxiibkiisa saaxiibadiisa ee liiska ciyaartoyda bedeleysa - ma ahan waxa aad fileysay. Young ayaa loo yaqaanaa inuu yahay degenaha DJ ee Red Devils, laakiin waxa uu qirtay inuu amar ku siiyay tababare Louis van Gaal inuu ciyaaro oo kaliya guriga iyo heesaha guriga.
Waxa ay noqotay arrin cajiib ah in United ay ciyaartoyda Louis van Gaal jecel yartahay in ay dhageystaan ​​tuncooyinka qashinka leh ee xariiqda baaskiilaha ah ka dib markii ay u hogaansameen kooxdiisa. Mararka qaar, wuxuu wax ka qabtaa DJ wuxuu isu dhigay.